Global Voices teny Malagasy » Fihaonambe GV tao Medellin, Kolombià: Paisa Power ho an’izao tontolo izao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Jona 2019 13:14 GMT 1	 · Mpanoratra Juan Arellano Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Mediam-bahoaka, Tsidika, vondrom-piarahamonina, Blaogim-Piarahamonina GV
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2016)
Paisa* Fihaonambe an'ireo GVers tamin'ny volana Jolay 2016. Medellín, Kolombià.
Ny vondrom-piarahamonin'ireo mpandika teny Espaniola ao amin'ny Global Voices no manana mpandika lahatsoratra betsaka indrindra, izay mahatonga azy tsy ho vondrom-piarahamonina maro an'isa fotsiny ato amin'ny fikambananay, fa ihany koa ny tena mamokatra indrindra amin'izao fotoana izao (2016). Ireo mpikambana ao aminy, sahala amin'ireo mpiteny ny fiteny espanola ihany, dia miparitaka any amin'ny tanibe vaovao sy ireo tranainy, monina any amin'ireo fitsinjaranora (fuseaux horaires) samihafa ary ny sasasantsasany amin'izy ireo aza dia monina any amin'ireo toerana izay tsy ny teny espanola akory no fiteny ofisialy.
Mampiseho fanamby iray tsy azo ihoarana izy io rehefa miezaka hiala amin'ny virtoaly ho amin'ny tena izy mba hanamafisana ireo rohy misy eo amin'ireo mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina. Mety tsy ho tanteraka aminay rehetra sy ho sarotra mihitsy ny hoe hifamotoana hifanatri-tava, hihaona aminà toerana iray voatokana. Ny akaiky indrindra vitanay hanatanterarahana an'io dia ny fiantsoana ireo mpandikateny voafetra mba hanatrika ireo fihaonambe GV, ary mazava loatra fa ny ankamaroany dia tsy ho afaka hanatrika an'ireny hetsika ireny.
Na izany aza, raha tsiahivina ilay filaza taloha hoe, “Raha toa tsy hankany amin'i Mohamet ny tendrombohitra, dia i Mohamet no tokony hanantona ny tendrombohitra”, manao izay azoko atao rehetra aho mba hihaonana amin'ireo mpandikateny espanola ao amin'ny GV rehefa misy dia alehako. Na tsy tonga any amin'ireo tanàna izay onenan'ny betsaka amin'ireo mpandika aza aho amin'ny ankapobeny (toa an'i Buenos Aires, Barcelone ary Madrid), kanefa tohizako hatrany ezako.
Nitondra ahy tany Medellin ny diako farany. Ny tena marina, tsy nanantena ny hikarakara fihaonana aho satria tsy mihoatra ny roa na telo ireo mpandikateny monina ao Medellin. Na izany aza, tamin'ity indray mitoraka ity, nahazo fandraisana tsara sy mpandikateny iray aho, Albany Rivera , nanamafy fa afaka mihaona foana amin'ireo solontenan'ny GV hafa izy. Mba hialàna amin'ny fihaonana ho an'olona roa fotsiny, nasaiko i Cati  sy Lully , mpanoratra GV eo an-toerana izay azoko nantsoina foana, ary koa i Gabriel  sy Henry , izay anisan'ny Hiperbarrio, tetikasa filamatra an'ny Rising Voices ao Medellin.
Araka izany, ny zoma 8 jolay hariva, tao amin'ny fisotroana kafe iray milamindamina ao afovoan-tanàn'i Medellin, niaraka tamin'i Cati aho mba hiandry an'ireo vahiny nasainay. Hafaliana be ny ahy, nipoitra tsirairay ry zareo, na dia i Lady Dianne  izay anisany nandray anjara ihany koa tamin'ny Hiperbarrio aza, dia tonga ary noraisina an-tanandroa.
Tena nafana dia nafana tokoa ny fifampiresahana ka tsy taitra izahay raha tsy efa nahita hoe niomana ny hanidy trano ilay toerana fisotroana kafe tamin'io andro io. Mbola somary nohaalavainay kely ny resadresaka nandritra ny fiarahanay lalana niaraka, nialohan'ny nanjohianay ny làlana mody any aminay tsirairay avy.
Satria tsy mikasa fotsiny hizara ny fijeriko mikasika an'io tatitra kely tamin'ny fihaonana io aho, niangavy an'ireo mpandray anjara aho, nanararaotra ny fotoanan'izy ireo, mba hanoratra lahatsoratra fohy mikasika an'io lohahevitra io.
Nanaiky ny fangatahako i Henry sady nanoratra hoe:
Tena nahafinaritra ny fihaonana. Samy nampitamberina ireo tantara kely nahatsikaiky izahay, nahita ny fomba nanilihana izay nitambesatra hatramin'ireo dingana izay nizoranay teo amin'ny Hyperbarrio sy ny fomba nivoaran'ireo fahalinana sy ireo filàna andrana ‘Convergentes’ ho an'ilay vondrom-piarahamonina. Tena mahafaly fo tokoa ny mahita an'i Catalina Restrepo sy Lully Posadas, satria efabe no tsy nifankahitanay, ary ny nihaonana tamin'i Albany koa.
Tetsy ankilany, nanoratra i Cati hoe:
Ilay fihanonana kely an'ny GV dia nahafahanay nanamafy orina fa tokony hasehon'ilay vondrom-piarahamonina ireo fifandraisana voarary tany ivelan'ny virtoaly nandritra izay taona maro nisiany izay, ary loharanon-kevitra iray ho anà ranomasimben-kevitra ny mpikambana tsirairay ao amin'ny GV . Ny porofon'izany ny fahasamihafan'ireo lohahevitra tamin'ny resadresaka, miainga amin'ireo raharaham-pianakaviana mankamin'ireo ‘metadata’ sy ireo sarintany, mankamin'ny fiarovana informatika, ankoatry ny maro hafa. Tokony hatao matetika kokoa sy tsy tapaka manaraka fandaharam-potoana ireo fihaonana eo an-toerana!
Tokony handramantsika atao izay hampisy ireny fihaonana kely iarahan'ireo mpandika teny ireny, araka izay azo atao (Miarahaba Mohammed !). Eo ampiandrasana izany, ampahafantariko anao ny fotoana sy ny toerana mikasika an'ireo diako amin'ny manaraka.
*Paisa dia fomba iray mahazatra anondroana ireo olona ao Antioquia, faritra iray misy ny tanànan'i Medellin.
Tamin'ny hatsaram-panahy no nandikan'i Helen Siers  ho amin'ny teny anglisy ity lahatsoratra ity
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/30/140844/